သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: March 2010
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 11:48 PM No comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကစားပွဲတွေ၊ ပြောင်းလဲခြင်းတွေနဲ့ ကြောက်ရွံထိတ်လန့်ခြင်းတွေ….
ကံကြမ္မာက တို့နှစ်ယောက်ကို ဒီနေရာကို ယူဆောင်လာခဲ့တယ် ဆိုတာပါပဲကွယ်..
ကိုယ်လေ... မင်းကို အိပ်မက်နေတုန်းပဲ…
လူတွေအမြင်မှာ ကိုယ်ဟာ အေး...ဆေး...လေး ပေါ့..
ကိုယ်.. မင်းကို… မိန်းမူးနေဆဲပဲ..
နှုတ်ဆက်စကား ပြောဖို့ အခါခါကြိုးစားတိုင်း စကားလုံးတွေဟာ လည်ပင်းမှာ တစ်ဆို့နေတယ်..
မင်းနဲ့ဝေးရာပြေးဖို့ ကြိုးစားတိုင်းလည်း အခါခါ ပြိုလဲတယ်…
ကိုယ်ကြိုးစားဖုံးကွယ်ပေမယ့် .. အရမ်းသိသာနေတာ တစ်ခုကတော့… မင်းနဲ့ဝေးရာနေရာမှာ ရှိနေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ကမ္ဘာဟာ တစ်စစီကြွေကျနေတယ်ဆိုတာပါပဲကွယ်…
ကိုယ်ဟာလွတ်လပ်ပေါ့ပါးနေသူတစ်ယောက်လိုဖြစ်နေပေမယ့် တစ်ကယ်တော့ အကျဉ်းသားတစ်ဦးပါ..
မင်းအချစ်ရဲ့အကျဉ်းသား.. မင်းအချစ်တွေရဲ့ ကျေးကျွန်။
မင်းကိုယ့်ကိုထားသွားတုန်းက အရာအားလုံးဘာမှမဖြစ်သလို ပြုံးနေခဲ့ပေမယ့်
intro plunkingကော.. စာသားလေးကိုကော မြတ်နိုးမိလို့...
တစ်ယောက်တည်း plunking နဲ့ တီးပြီး ဆိုလို့ကောင်းတဲ့ သီချင်းလေးပါ။
Macy Gray လည်းဆိုပေမယ့်လည်း Ben Taylor ရဲ့ ဂစ်တာသံက ပိုလှလို့...
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:03 AM2comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကဏ္ဍ : သီချင်း, သီချင်းစာသား
1. LooseaSnooze (Which do you think is better, to hit the snooze button and get up 30 minutes later? Or to get up when your alarm actually goes off? Dr. Oz says to lose the snooze. He says that the deeper sleep is when you have REM sleep (when you have dreams) and restorative sleep, but this can’t happen when your alarm is going off and you are hitting the snooze button. So the extra 30 minutes of sleep you get after the snooze button does not actually help your fatigue.)
2. GetaLemon Lift (lemon keeps you awake and alert. So if you are feeling tired or sluggish, try putting some Lemon Oil on the inside of your wrists for an instant lemon lift)
3. Get Multi-Vitamines (counteractabig heavy lunch - take Multi-vitamins after or before big meals to dilate your arteries back to being bigger)
4. D-Ribose ( Put this sugar-like power into juice especially less sweet juice like orange juice or grapefruit juice).
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 4:38 PM No comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကဏ္ဍ : Dr Oz, my notes
Makeamixture of natural yogurt, sunflower oil, and lemon juice – blend it well – apply it to your face -wash off gently and pat dry… you will haveabeautiful complexion! Yogurt has lactic acid for exfoliating, sunflower oil seals in moisture and lemon juice isanatural whitener that prevents age spots.
2. Incorporate the honey into the banana.
3. Add several drops of juice fromalemon or an orange.
4. Spread evenly on your face.
5. Relax for 15 minutes and rinse the mask off.
2. Carefully peel back the inner shell's "skin"
4. Continue removing the shell's "skin" and placing on your face until all of your acne is covered.
5. Let the egg's "skin" work on your skin for 15 minutes.
6. Peel the egg's "skin" off of your face and see the impurities go with it!
Blotchiness Tx - Mask
1. Beat the egg white until frothy.
2. Beat in the juice from halfalemon.
3. Cover your face with the mask.
4. Leave it on for 15-30 minutes.
5. Rinse off your face with warm water.
blackheads are caused by hair follicles that are trapped beneath your skin's surface. If you pop you pimples or blackheads, you can cause damage to your skin, and even worse, you can potentially poison yourself because the puss can get into your bloodstream and go straight to your brain.
1. Mix together the epsom salt and water.
2. Wash the area with blackheads or pimples with the solution.
Pantry Spa Tip: You can also makeascrub by taking epsom salt and addingafew drops of water andalittle honey... this scrub works well to kill and clear up your blackheads and pimples!
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 4:51 PM 1 comment: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကဏ္ဍ : Dr Oz, face lift, my notes
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 11:45 PM No comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
မြန်မာတို့အချင်းချင်း မြန်မာလိုလွယ်လွယ်ကူကူ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီး၊ ဆွေးနွေး နှီးနှောဖလှယ်နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ပြုလုပ်ထားတဲ့ ကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဘယ်နေရာရောက်နေ ရောက်နေ မိမိ အသိုင်းအ၀န်း သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းများနဲ့ လွတ်လပ် ပျော်ရွှင်စွာ ဆွေးနွေး နှီးနှောဖလှယ်နိုင်ကြတဲ့ နေရာလေးတစ်ခုပါ။ ဒီကွန်ရက်ဟာ Face Book နဲ့ အနည်းငယ်ဆင်တယ်လို့လည်း ကျမထင်မိပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားကြတယ်ဆိုရင်...
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:05 AM No comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကဏ္ဍ : မြန်မာ့လူမှုဆက်ဆံရေးကွန်ရက်, ကြော်ငြာ
စာက ရေးလက်စ မရှိတော့ရင် တစ်ကယ်ဘယ်က စရမှန်း မသိတော့လောက်အောင်ဖြစ်ရပါတယ်။ အခုလည်း "ငြိမ်နေရခြင်းအကြောင်း" လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ထိုင်နေတာ ၁၀မိနစ်ခန့်ရှိသွားပါပြီ။ "လာလည်ကြတဲ့လူတွေ အားနာဖို့ကောင်းတယ်၊ နားတယ်ဆိုလည်း နားတယ်ပြောလေ" လို့ ဘလောဂါသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်ကပြောတာနဲ့ "ဘလောဂ်နားခြင်း" ဆိုပြီး ရေးမယ် စိတ်ကူးသော်လည်း အဲသလို ဘလောဂ်နားဦးမယ်ဆိုပြီး ရေးလိုက်ပြီးကာမှ ပိုစ်တွေက တံစက်မြိတ်ကမိုးသွန်ချသလို ထွက်လာချင်တာက ပိုခက်လို့ ဘာမှကို မရေးဘဲ ဒီအတိုင်းငြိမ်နေတာပါ။
လာလည်သူများကိုတော့ အားနာပါတယ်။ မလေးတော့ အလုပ်တွေအရမ်းများပြီး အချို့ရက်တွေ ကွန်ပြူတာတောင်မဖွင့်နိုင်ပါလို့...။ အချို့ဘလောဂ်များကိုတော့ အလျှင်းသင့်သလို ဖတ်ပါတယ်လို့။
အခုလည်း သုံးလေးငါးလ စာရေးခြင်းကို ရပ်ပါမယ်လို့ ပြောချင်သော်လည်း မပြောပါဘူး။ အဲသလိုပြောပြီးတာနဲ့ စာတွေကထွက်ထွက်လာတတ်လွန်းလို့ပါ။ ဒီကြားထဲမှာ ကိုယ့်ဟာကိုယ်တင်ထားတဲ့ အိုလံပစ်မီးတိုင်ကြီးကို ကြည့်ကြည့်ပြီးလည်း စိတ်က မချမ်းသာလှပါဘူး။
အခုလောလောဆယ်တော့ ဘာမှ ပြောစရာမရှိပါဘူး။
ပြောစရာ မရှိပါဘူးဆိုမှ ပြောစရာတစ်ခုက ထွက်လာပြန်ပါပြီ။
ဒီမြို့မှာ ဟိုတလောက၊ ကလေးလေး ရက်သားလေး၊ နေ့လည်ခင်းတစ်ခုမှာ ကားထဲမှာ အိပ်မောကျနေတာကို မိဘတွေက မနှိုးရက်လို့ ဒီအတိုင်း ကားစက်ကိုနှိုးထားပြီး drive way မှာ ထားထားတယ်။ စက်နှိုးထားတာ ကလေးချမ်းမှာစိုးလို့ ကားကိုအပူပေးထားတာပါ။ အဲဒါ ကားသူခိုးအတွက် အတော်ဖြစ်သွားပါတယ်။ ကားကလည်း သော့တန်းလန်း စက်ကလည်း အဆင်သင့်နှိုးထားပြီးသားမို့ ကားကို ခိုးသွားပါတယ်။ သူခိုးက တော်တော်လေး မောင်းပြီးမှ ကားနောက်ခန်းမှာ ၆ပတ်သားလေး ပါလာတာ သတိထားမိပြီး ကားကိုရပ်ပြီး ထွက်ပြေးသွားတယ်။ ကားကိုတော့ လူမြင်ကွင်းမှာ ထားထားပေးခဲ့တယ်။ သူခိုးက စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ သူခိုးမို့ တော်ပါတော့တယ်။ ရဲတွေရှာတွေ့နိုင်မည့် လူတွေမြင်နိုင်မယ့် နေရာမှာ ထားပေးခဲ့လို့။ ကလေးမိဘတွေလည်း တငိုငို တရယ်ရယ်နဲ့ ကလေးကော ကားကောပြန်ရလို့ အဆင်ပြေသွားပါတယ်။
အဲဒီတော့ ကလေး မိဘများ သတိထားကြပါ။ ကလေးအိပ်နေလည်း နှိုးပြီးသာ ခေါ်သွားပါ၊ မဟုတ်ရင်လည်း ကိုယ်ပါ ကားထဲမှာ ကလေးနှင့်အတူအိပ်ပါ။ သူခိုးက ကိုယ့်ကို မမြင်ဘဲ ကားကို "မ" သွားလည်း အနည်းဆုံး ကိုယ်က ကလေးနှင့် အတူရှိနေနိုင်တယ်။ အဲဒါလေး သတိပေးချင်တာပါပဲ။